गरिबी हटाउन युवा वैज्ञानिक लाग्नुपर्छ : क. माधवकुमार नेपाल - Left Review Online
गरिबी हटाउन युवा वैज्ञानिक लाग्नुपर्छ : क. माधवकुमार नेपाल
काठमाडौं । नेपालमा सार्क युवा वैज्ञानिकहरुको सम्मेलन सुरु भएको छ । प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको संयुक्त आयोजनामा बुधबारबाट ललितपुरमा सम्मेलनको सुरु गरिएको हो ।
सार्क क्षेत्रमा भएका विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धिहरुको अनुभव साटासाट गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकमा विद्यमान गरिबी हटाउने गरी विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न युवा वैज्ञानिकहरुलाई आह्वान गरे । उनले सरकारले विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहेको बताउँदै उनले सोही अनुसारको वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेता नेपालले जमिन, पानी र वन क्षेत्रको उचित परिचालन गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा जर्मनी, बेलायत, फिनल्याण्डसहितका देशका युवा वैज्ञानिकहरुको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिकहरुको कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ ।
पछिल्लाे - नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्याहरु
अघिल्लाे - एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद बारे